Global Voices teny Malagasy » Alzeria : Tsy Dia Mirongatra Loatra Ny Fihetsiketsehana Manohitra Amerikana Mitaha Amin’ireo Firenena Arabo Hafa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Septambra 2012 13:03 GMT 1	 · Mpanoratra Salah Ziad Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika
Io lohatenin-dahatsoratra  iray navoakan'ny www.algerie1.com  io no mamintina ny vaovao alzeriana ny andron'ny Zoma 17 septambra izay naha-lasibatra ireo solotena tandrefana, indrindra fa ny Amerikana, nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana tamina toerana maro samihafa tany amin'ny tontolo arabo, taorian'ny nandefasana tao amin'ny Youtube ilay lahatsary « Innocence des musulmans », na «Ny havendranan'ny Miozolmana» nanivaiva ny mpaminany Mohamed. Ny gazety alzeriana, afa-tsy ny lohateny iray ho an'ny mpiteny arabo, ny www.echouroukonline.com  , dia tsy nanome toerana loatra ho an'ilay hetsika na ny momba ny tsy fanjariany no tena marina kokoa. Araka izany, ny www.elwatan.com  dia nanao lohateny hoe:
Momba io raharaha io ihany, io lohateny io dia namoaka fa an-tajony ireo mpanao hetsi-panoherana no niampanaga ilay lahatsary fototr'olana tany Oran, tanaàna faharoa lehibe any an-toerana. Araka izany, nifanehatra taminà mpitandro filaminana marobe, nionona tamin'ny fametahana sora-baventy ireo mpano fihetsiketsehana tao Oran, toerana izay namerenany sy niventesan-dry zareo ny teny faneva nalefan'ireo fantsom-pahitalavitra arabo mandeha amin'ny zanabolana. Ny lohateny lehibe iray hafa tamin'ny gazety miteny frantsay, www.liberté-algerie.com , dia nisafidy ny hifantoka tamin'ny tranga nisy tao KAiro, , Tunis, Sanaa, Khartoum, tamin'ny tsy firaharahiana tsotra izao ireo andrana hanaovana diabe tao Alger sy Oran indrindra indrindra. Raha toa koa ny « Echourouk », tranonkala iray fantatra amin'ny fironany amin'ireo islamista, nihevitra [ar] fa:
Ankoatra izay, ny fampitandremana navoakan'ny masoivoho Amerikana tao Alger ho an'ireo teratany amerikana tsy hivezivezy any Alzeria dia nisarika ny sain'ny gazety sasany, indrindra fa ireo ety anaty aterineto. TSA (www.tsa-algerie.com ) dia nanontany tena momba ny fahanginan'ny manampahefana alzeriana mikasika io fampitandremana avy amin'ny diplaomasia amerikana io. Hoy Samir Allam manoratra  :
Ao anatin'io taratasy io ihany, ilay gazety dia nananmbara fa i Ali Bel Hadj, laharana faharoan'ny FIS (antoko islamista nofoanana) dia nanandrana ny hanohitra teo anoloan'ny foiben'ny masoivohon'i Etazonia ao Alger, izay nahatonga azy noraofin'ny polisy. Ho an'ny tranonkala www.dna-algerie.com  kosa, ry zareo dia nifantoka tamin'ny fanafihana ny masoivoho amerikana tao Tunis  sy ny fandorana sekoly amerikana iray to amin'io tanàna io ihany. Tsy niloa-bava izy mikasika ireo andrana hanao fihetsiketsehana tao Alger sy tany an-kafa. Toy izay koa ny www.algeriepatriotique.com  izay, ankoatry ny fifandonana nitranga tao Tunis, dia nisafidy ny hampiresaka manampahaizana manokana momba ilay raharaha, manampahaizana izay nanipy ny baolina ho any amin'ireo ‘extermistes’ avy eo. Sonia B dia nanampy tamin'ireo antso hanaovana fihetsiketsehana:
Eny anaty tambajotra sosialy, tsinjo ny fisian'ny fifandirana kely eo amin'ireo niantso mba hameno ny arabe sy ireo, mifanohitra amin'izay, niantso fitoniana sy fifehezan-tena. Araka izany ny pejy facebook 123 viva l’algerie , izay tamin'ny Janoary 2011 dia niavaka tamin'ny fakàny toerana nanohitra ny nantsoina hoe « Lohataona arabo » dia mbola niandraikitra ny asan'ny mpamono afo indray tamin'ity. Mandritra io fotoana io, ny sasany tamin'ireo mpampiasa facebook dia nanandrana ny namoaka ny olona ho eny an-dalambe. Marihana fa ny maoske rehetra tao Alzeria, mpampahalala vaovao iray manana ny toerana ihany koa, dia samy nandresy lahatra ireo miozolmana nandritra ny vavaka isan-joma mba tsy hisendaotra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/09/16/38334/
 nihevitra : http://www.echoroukonline.com/ara/#dzrotlink_3
 fanafihana ny masoivoho amerikana tao Tunis: http://www.dna-algerie.com/international/tunis-l-ambassade-us-prise-d-assaut-une-ecole-americaine-brulee-par-des-manifestants-2